China n'akụkụ ịgba retort ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Dingtaisheng
Ezi njikwa okpomọkụ, oke nkesa ọkụ
The anọ direction spray nozzles ndokwa na onye ọ bụla tree nwere ike iru otu mmetụta na ihe ọ bụla tree ọnọdụ na elu na ala n'ígwé, n'ihu, azụ, ekpe, aka nri, na imeta ezigbo kpo oku na nwoke ịga ụlọ àgwà. Usoro nchịkwa okpomọkụ (usoro D-TOP) nke DTS mepụtara nwere ruo usoro 12 nke njikwa okpomọkụ, a pụkwara ịhọrọ nzọụkwụ ma ọ bụ usoro dịka ngwaahịa dị iche iche na usoro nhazi usoro kpo oku, nke mere na nkwụghachi na nkwụsi ike dị n'etiti ogbe ngwaahịa na-maximized ọma, na okpomọkụ nwere ike ịchịkwa n'ime ± 0,5 ℃.
Njikwa nrụgide zuru oke, kwesịrị ekwesị maka ụdị nkwakọ ngwaahịa dị iche iche
Ogwe njikwa nrụgide (usoro D-TOP) nke DTS mepụtara na-agbanwe nrụgide n'ime usoro dum iji dozie mgbanwe nrụgide nke ngwugwu ngwaahịa, nke mere na ogo nke nrụrụ ngwaahịa na-ebelata, n'agbanyeghị akpa siri ike nke mkpọ, ite aluminom ma ọ bụ karama plastik, igbe plastik ma ọ bụ ihe mgbanwe na-agbanwe agbanwe nwere ike ịdị mfe afọ ojuju, enwere ike ịchịkwa nrụgide ahụ n'ime ± 0.05Bar.
Ngwunye ngwaahịa dị ọcha dị ọcha
A na-eji onye na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke mere na uzuoku na mmiri dị jụụ adịghị emetụ aka na mmiri usoro. Agaghị ebute ihe na-adịghị ọcha na uzuoku na mmiri jụrụ oyi na nsị sterilization, nke na-ezere mmetọ nke abụọ nke ngwaahịa ahụ ma ọ chọghị kemịkal ọgwụgwọ mmiri (Ọ dịghị mkpa ịgbakwunye chlorine), na ndụ ọrụ nke onye na-ekpo ọkụ ọkụ bụkwa gbasaa nke ukwuu.
Dabara na akwụkwọ FDA / USDA
Nchekwa ike na nchebe gburugburu ebe obibi
> Obere nke mmiri mmiri a na-ekesa ngwa ngwa iji rute ogo izu ụlọ izu ike.
> Obere ụda, mepụta ọnọdụ dị jụụ ma dị mma.
> N'adịghị ka nsị dị ọcha dị ọcha, ọ dịghị mkpa ịmịcha tupu kpo oku, nke na-azọpụta ụfụ ọkụ ma na-echekwa ihe dịka 30% nke uzuoku.
Tinye ngwaahịa a n'ime ụlọ ịgba ụlọ na mechie ụzọ. A na-ejikwa ụzọ nchebe atọ na-ejikọ ọnụ ụzọ ahụ. N'ime usoro a dum, a na-agbachi ụzọ ahụ n'ụzọ.
Debe mmiri kwesịrị ekwesị na ala nke nlọghachi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a nwere ike ịgbanye akụkụ mmiri a na akpaghị aka na mmalite nke ikpo ọkụ. Maka ngwaahịa ndị a na-ekpo ọkụ, akụkụ a nke mmiri nwere ike ibu ụzọ kpoo ọkụ na mmiri ọkụ ma tinyezie ya. N'oge usoro nwoke ịga ụlọ ọgwụ niile, akụkụ a nke mmiri a na-agbapụta na ngwaahịa ahụ site na nnukwu mgbapụta mgbapụta na ụzọ anọ na-agba agba agba agbazi na tray ngwaahịa ọ bụla iji nweta otu mmetụta ahụ na ọnọdụ ọ bụla dị na elu na ala , ihu, azụ, aka ekpe na aka nri. Yabụ nke kachasị mma kpo oku na ụlọ mmịcha ka enwetara. N'ihi na ntuziaka nke onu ahụ doro anya, ziri ezi, edo na nke ọma mmiri ọkụ na-ekesa nwere ike nweta na etiti nke ọ bụla tree. A na-enweta usoro dị mma maka ịbelata enweghị ike okpomọkụ na tankị nhazi nke nnukwu mgbatị.
Kwadebe ihe na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka mmiri ọgwụ na-ekpo ọkụ na ebe a na-ekpo ọkụ na nke jụrụ oyi, mmiri mmiri na-agafe n'otu akụkụ, uzuoku na mmiri dị jụụ gafere n'akụkụ nke ọzọ, nke mere na ngwaahịa ahụ akpachapụghị anya ga-akpọtụrụ steam na obi jụrụ mmiri na-aghọta aseptic kpo oku na obi jụrụ.
N'ime usoro a dum, ihe omume a na-achịkwa nrụgide dị n'ime mgbagha ahụ site na inye nri ma ọ bụ iwepu ikuku agbakọtara site na valvụ akpaka na mgbagha. N'ihi ịgba ọgwụ ịgba ọgwụ mmiri, nrụgide dị na azụ ahụ anaghị emetụta ọnọdụ okpomọkụ, enwere ike ịtọ nrụgide kpamkpam dịka nkwakọ ngwaahịa dị iche iche, na-eme ka akụrụngwa zuru oke (mpempe akwụkwọ atọ, mpempe akwụkwọ abụọ, mgbanwe nkwakọ akpa, karama karama, plastic nkwakọ wdg).
Mgbe usoro ịga ụlọ ọgwụ gachara, a ga-ewepụta mkpu mkpu. N'oge a, enwere ike imeghe ma budata ya. Mgbe ahụ kwadebe ka sterilaiz ọzọ ogbe nke ngwaahịa.
Ọdịdị nke nkesa okpomọkụ na nlọghachi bụ +/- 0,5 ℃, a na-achịkwa nrụgide na 0.05Bar.
Plastic tree Akpa uwe na-agbanwe agbanwe
Mmiri ara ehi ngwaahịa juru n'ọnụ na mgbanwe mbukota
Akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi (mushrooms, akwụkwọ nri, agwa) juru na akpa na-agbanwe agbanwe
Anụ, ọkụkọ na akpa nkwakọ akpa
Azụ na nri mmiri na akpa na-agbanwe akpa
Nri ụmụaka na akpa na-agbanwe akpa
Nri iji rie nri na obere akpa
Nri anụ ụlọ juru na obere akpa
Nke gara aga: Cascade retort
Osote: Mmiri Imikpu Mmiri
Multifunctional Water raygba Retort
Gba Retort Sterilizer
Mmiri Retgba Retort Machine
Water Spgba Sterilizing Retort Machine